Thenga izitifiketi zamatriki ezifakiwe ku-intanethi - Buy Fake Passports Online – Buy Real Passports Online
Udinga ukuthenga isitifiketi se-matric ebhalisiwe ku-intanethi? Sifikile ukuzosiza. Siye saba phambili ekudaleni ama-passports nama-ID kubantu abavela emhlabeni jikelele iminyaka engaphezu kwengu-10, futhi manje sinikeza isevisi yethu yokudala isitifiketi samatriki kubantu baseNingizimu Afrika.
Kwakukhona amawebhusayithi amabili amakhulu anikeza izitifiketi zamatriki eNingizimu Afrika. Bobabili bahlaselwe amaphoyisa namasayithi athathwe ngaphandle. Singabantu isikhungo esinolwazi futhi sixhumeke kangcono kakhulu.
Kumane udinga ukugcwalisa ifomu ngolwazi lwakho nezikhonzi zakho, bese ukhokha imali engu-R500. Abamele bendawo baseNingizimu Afrika bazokwakha isitifiketi sakho se-matric bese besibhalisa ngosuku olufanayo. Sizokwazi ukukhipha ukulethwa ngosuku olulandelayo.
Singabantu inkampani yasemhlabeni esungulwe ngeminyaka engaphezulu kwengu-10 ekudaleni amadokhumende. Kungani isitifiketi sakho se-matric senziwe kwezinye izansi ezingaphansi, lapho ungenza khona futhi ubhalisiwe ngabachwepheshe. Izitifiketi zethu zamatriki ziqinisekisiwe njengeziqalo, ngakho-ke ngisho noma zihlolwe ngu-Umalusi, zizobonisa njengento yangempela.
Thenga isitifiketi se-Matric Fake
Uma usukulungele ukuthola umsebenzi okhokhela kahle eNingizimu Afrika, lalela isitifiketi sakho esiphezulu namhlanje. Uzothola ezandleni zakho ezinsukwini ezimbalwa. Ukuze uqale i-oda lakho, faka ifomu le-oda le-inthanethi lapha.
(Due to the large number of emails asking for alternative payment methods, we are unable to reply to all of you. Payments can only be made in bitcoin. If you email asking for an alternative payment method, you will be ignored)